Niangavy vonjy ny Isiraely rehefa nirehitra tany ivelan'i Jerosalema ny afo mirehitra goavambe
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Israel Vaovao Vaovao » Niangavy vonjy ny Isiraely rehefa nirehitra tany ivelan'i Jerosalema ny afo mirehitra goavambe
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nilaza ny minisiteran'ny raharaham-bahiny Israel fa nitady fanampiana tamin'ny firenena maro hafa izy, nangataka fanampiana avy hatrany amin'ny rivotra mba hiadiana amin'ny fahamaizana.
Ny afon-trano tsy voafehy dia nanimba ala sy tanimboly
Mandrahona ireo tanàna manodidina ny afo mandoro.
Ny alahady teo no niseho ny afo ary mbola tsy voafehy ihany.
Ny firehetan'ny afo tsy voafehy tany ivelan'i Jerosalema dia nahatonga ny governemanta israeliana niantso vonjy iraisam-pirenena.
Afon'afo goavambe dia efa nandrava ala sy tanimboly, nandoro tany 4,200 hektara farafahakeliny ary mandrahona tanàna maro manodidina.
Ekipa mpamono afo miisa 75 sy fiaramanidina 10 eo ho eo no niady tamin'ny afo teo akaiky teo Jerosalema ny alatsinainy, araka ny voalazan'ny Israelin'ny afo sy famonjena. Andro iray talohan'io no niseho ny afo ary mbola tsy voafehy ihany.
Mampiseho afo mirehitra manaraka ny arabe ireo sary nidina avy tany ambanin'ny tany, miaraka amin'ireo mpamily tsy maintsy mandeha mamaky infernos.
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index./
Vondron'olona marobe ao amin'ilay faritra no nafindra toerana, anisan'izany ny trano ao amin'ny tanàna Givat Yearim, any andrefan'ny Jerosalema. Sary an-tsary avy any an-toerana dia mampiseho fa ny trano sasany ao anatin'ny fonenana dia efa tratry ny haintrano.
Mandrahona ny hopitaly lehibe indrindra ao amin'ny firenena ihany koa ny afo, Hadassah Medical Center, izay eo am-pelatanan'ny afo. Nilaza tamin'ny haino aman-jery israeliana ny polisy tao Jerosalema fa niara-niasa tamin'ny hopitaly izy ireo mba hanampiana ny mpiasa hiomana amin'ny famindra toerana. Hatramin'ny alatsinainy hariva dia nandidy ny fotodrafitrasa izy ireo mba hanomboka hanadio ny toeram-piantsonany mba hanamorana ny fivoahana, na dia mbola tsy nisy aza ny nambara.
IsiraelyNilaza ny minisiteran'ny raharaham-bahiny fa nitady fanampiana tamin'ny firenena maro hafa izy, nangataka fanampiana avy hatrany amin'ny rivotra iadiana amin'ny afo. Ny minisitry ny raharaham-bahiny grika Nikos Dendias dia nilaza tamin'ny mpiara-miasa israeliana Yair Lapid fa “hanampy betsaka araka izay tratra” ny firenena, hoy ny minisitera. Gresy dia tototry ny doro tanety foana, ary miatrika fitsikerana miverimberina ny governemanta ny amin'ny fandraisan'ny fanjakana ny voina.